Myanmar recibe primer E190 |
El CEO de Mtanmar Airways, Saravanan Ramasamy, dijo que “la llegada del E190 representa un hito importante en la estrategia de expansión de la flota de mai. Este avión de alto rendimiento no solo nos permite lograr la eficiencia operativa, sino que también proporcionaanuestros clientes una experiencia significativamente mejorada”.
“Damos la bienvenidaaMyanmar Airways Internationalala familia Embraer y les deseamos lo mejor en preparación para el inicio de sus vuelos comerciales E190. El E190 aporta rendimiento y eficienciaaMyanmar Airways Internationalamedida que amplían su red y ofrecen una excelente cabina para que los pasajeros viajen con comodidad”, dijo Raúl Villarón, Vicepresidente de Aviación Comercial de Embraer para Asia Pacífico.
Mtanmar Airways CEO Saravanan Ramasamy said that “the arrival of the E190 represents an important milestone in Mai ‘fleet expansion strategy. This high-performance aircraft not only enables us to achieve operational efficiency, but also provides our customersasignificantly improved experience”.
“We welcome Myanmar Airways International to the Embraer family and wish them the best in preparation for the start of their commercial E190 flights. The E190 brings performance and efficiency to Myanmar Airways International as they expand their network and offer an excellent cabin for that passengers travel in comfort”, said Raúl Villarón, Embraer’s Vice President of Commercial Aviation for Asia Pacific.
Mtanmar လေကြောင်းလိုင်း၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Saravanan Ramasamy က “E190 ရောက်ရှိခြင်းသည် Mai ၏တိုးချဲ့မဟာဗျူဟာ၏အရေးပါသောမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လေယာဉ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအောင်မြင်စေရုံသာမကထောက်ပံ့ပေးမှုကိုပါပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသိသိသာသာတိုးတက်လာသောအတွေ့အကြုံ”။
“Embraer မိသားစုကို Myanmar Airways အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်။ E190 ပျံသန်းမှုစတင်မယ့်အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ E190 ဟာမြန်မာလေကြောင်းလိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုသူတို့ကွန်ယက်ကိုတိုးချဲ့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုကမ်းလှမ်းလာတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ”။ ခရီးသည်များအဆင်ပြေစွာခရီးသွားလာနိုင်ကြောင်း Embraer ၏စီးပွားဖြစ်လေကြောင်းဆိုင်ရာဒုတိယဥက္ကPresident္ဌRaúlVillarónကပြောကြားခဲ့သည်။